Posted by သက်ဝေ at 10:50 PM
TURN-ON-IDEAS October 31, 2010 at 11:01 PM
သားနဲ့ တိုင်ပြောမယ်... :)
စာဖတ်နေတုန်း တန်းလန်းကြီး စချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့ ဘယ်သူမှ ဝင်မရေးသေးတော့ မကြီးဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးအမှတ်တရ မန့်လိုက်တာ...
khin oo may October 31, 2010 at 11:06 PM
တို့ကသေချာဖတ်နေတာ...အစအဆုံး. နေရာမဦးမိလိုက်ဘူး. ဟင်း.
ကိုမဆလာိုသာဆိုရင်တော့မမှာပါနဲ့ကွာ. အလုပ်နဲ့ သွားတာ အပျော်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းမှာတာတွေလဲမရှာအားပါဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။
(Like တွေ လုပ်ပြီး Comment တွေ ဘာတွေလည်း ရေးရသေးသည်ပေါ့…။ ) ဆိုတာဖတ်ပြီးတော့ကာတော့ zt ပို့စ်ကိုသတိရမိတယ် မှာတာတွေ ဝယ်မလာရင်တော့ block လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် remove ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတော့လုပ်ပါသက်ဝေ.
ပါလာရင်တော့လဲ အင်း....ဘလော့မှာရော ဖဘမှာရောကြွားပါလေ. ကြည့်ပရစေ.
khin oo may October 31, 2010 at 11:17 PM
ဒါနဲ့စကားမစပ်ဖန်ခွက်က ဘာအဓိါပါယ်လဲ။.
TURN-ON-IDEAS October 31, 2010 at 11:17 PM
ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားလို့ အရီးကွန်ကို ၅မိနစ်ခန့်နဲ့ ကပ်ကျောသွားတာ...
အလောတကြီး ရေးလိုက်မိတာ သိပ်တော့လည်း မကောင်းပါဘူးလေ...
ပို့စ်လေးက အစွမ်းထက်လွန်းလို့ အစ်ကိုတစ်ယောက် ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးရင် ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာနေအုံးမယ်...
မကြီးပြောသလိုပဲ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးတွေ လွယ်ကူအဆင်ပြေလာပေမယ့် အေးစက်စက်တော့ အဖြစ်သား...
ဘာလို့ အစ်ကို့ဖုန်းကို messageမပို့တာလဲ၊ အဲဒါက နည်းနည်းပို အအေးဓာတ်လျော့စေမလားပဲ...
အိမ်က ခလေးမ ဒီပို့စ်ကို ပေးဖတ်လို့မဖြစ် နဂိုတည်းက လူက အရည်ပျော်ချင်နေတာ...
TURN-ON-IDEAS October 31, 2010 at 11:18 PM
အေးစက်စက်နဲ့ အရည်ပျော်တာ၂ခုကို ပြောချင်တာနဲ့ တူတယ် အရီးကွန်...
ဟီး ရမ်းတုတ်ကြည့်တာ... :D
သက်ဝေ October 31, 2010 at 11:25 PM
TOI နဲ့ မမ... ချက်ချင်းလာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူးပါ...
TOI... Phone ကို Message ပို့ပါတယ် ဒါလဲ အေးစက်စက်ပါပဲ...း))
မမ... ဖန်ခွက်က တယောက်ထဲ အမူးသောက်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့...း))
ဒေါင်းမင်း October 31, 2010 at 11:29 PM
Ko Boyz October 31, 2010 at 11:40 PM
သက်ဝေ October 31, 2010 at 11:45 PM
ရေသောက်ပြီး မူးနေတာပါဗျ...း))
Sunny October 31, 2010 at 11:48 PM
မမသက်ဝေက လွမ်းနေတာကိုး.. ဟုတ်တယ်.. အဲလိုမျိုး ခံစားဖူးတယ်.. ထိုင်ရမလို ၊ ထရမလို.. အခုပဲ ထလိုက်သွားရင်ကောင်းမလိုလိုနဲ့.. အစ်မမှာတဲ့လက်ဆောင်တွေ အကုန်ပါလာပါစေ..
ZT November 1, 2010 at 12:50 AM
..... သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။ :P
Moe Cho Thinn November 1, 2010 at 1:09 AM
ကိုကြီးက ဘယ်အားပါ့မလဲ၊ သူ အသည်းလေး နဲ့ တွေ့နေပြီ။ ဟားဟား
တနေ့က အသည်းအကြောင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ သူ့စာတမ်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ပုံ ဖဘမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ :P
Anonymous November 1, 2010 at 4:52 AM
ဘာလို့ တွေးနေတာလဲဆိုတော့ .. ဒါကြောင့်ကိုး။ သိသွားပြီ။
ပုံရိပ် / Pon Yate November 1, 2010 at 4:58 AM
အစ်မသက်ဝေ လွမ်းနေပြီ ထင်တယ်...။
မယ်ကိုး November 1, 2010 at 7:00 AM
မမ စာလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ။း)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 1, 2010 at 9:20 AM
(မ).....ချစ်သူ့ထံ ရည်မှန်း ပျို့မှာတမ်း ဆက်တယ်ရှင်....
post တခုတော့ ရတာပဲရှင်...
သော်တာလမင်း သာဆဲမှာပဲ ဒါပဲ စိတ်စွဲလို့ပင်
ချစ်သူမျက်နှာလေးကိုတမြင်မြင်..စားစားသွားသွားနေနေ မောင့်အပူ ပွေသူပါရှင်..
(ကျား)..ခိုင်းတော့သက်ဝေ..အချစ်စမ်းချင်စမ်း မစမ်းချင်နေ..မင်းခိုင်းလို့ နိုင်ငံခြားထိပြေးလို့ ငွေရှာသလေ..လိုရာကိုယူကြည်ဖြူပါတယ်လေ...
Vista November 1, 2010 at 10:35 AM
အောာာာ လက်စသတ်တော့ အကိုဂျီး ဖုန်းမဆက်လို့ ကိုး
သက်ဝေ November 1, 2010 at 10:41 AM
ကိုကြီးကျောက် သီချင်းလေးရေးသွားတာ သဘောကျလိုက်တာ… အဲဒီသီချင်းကို ပြန်ဆိုကြတဲ့သူတချို့တောင် စာသားကို မှန်အောင် မဆိုတတ်ကြဘူး…
မောင့်အပူ ပွေ သူ ပါ ရှင်… ဆိုတာကို မောင့်အပေါ် ဗွေ မ ယူ ပါ ရှင်… လို့ ဆိုလိုဆို…
မိန်းကလေး လက်ရေး သီ ရင် ခွင့်လွှတ်မယ်ထင်… ဆိုတာကို မိန်းကလေး လက်ရေး သိရင် လို့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အကောက်လွဲပြီး ဆိုနေကြတာ… ကြားရတာ အဆင်မပြေဘူး...
ဒီပိုစ့်ကိုရေးနေတုန်းက ပျို့မှာတမ်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မလို့တောင် စဉ်းစားမိသေးတယ်…း))
ခိုင်းတော့သက်ဝေ ဆိုရင်တော့ ခိုင်းရက်ဖူးကွယ့် သည်မောင့်လည်ဆွဲ ပုလဲသွယ်ရေ လို့ ပြန်ဆိုလိုက်မှာပေါ့…း))
အမ မခင်မင်းဇော်၊ ကိုဇက်တီ၊ ညီမ Sunny၊ ချိုသင်း၊ ဆားပုလင်း နှင်းမွန်၊ ပုံရိပ်၊ မယ်ကိုး၊ Vista နဲ့ ကိုကြီးကျောက်… ကော်မန့်များအတွက် ကျေးဇူးပါ…။
:P November 1, 2010 at 11:09 AM
ဒီစာဖတ်ပြီးရင်တော့ မှာတာတွေရော၊ မမှာတာတွေပါ တထောကြီးဝယ်လာတော့မှာပဲ..
Anonymous November 1, 2010 at 12:50 PM
ကိုယ်ဖတ်မိ သလောက် ဘလောက်တွေကနေ - ဒီ conclusionကိုရ၏။
ဘလောက်ဂါ မမတိုင်း၏ ယောက်ကျားများသည် စိတ်ရှည်သည်းခံ မိန်းမကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်၏။ (သို့) စိတ်ရှည်သည်းခံ မိန်းမကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်သော ယောက်ကျားရှိသူများသာ ဘလောက်ဂါ မမ ဖြစ်ကြ၏။
ဥပမာ - မသက်ဝေ၊ မစုချစ်သူ၊ မချစ်ကြည်အေး၊ မမိုးချိုသင်း၊ လင်းလက်ကြယ်စင်
ထိုသူများ၏ ပို့စများကို ဖတ်သောအခါ ချိုအီအီ ခံစားရသည် (မနာလိုတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ဟီး)
ဘလောက်ဂါ ယောက်ကျားများတွင် သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက် ယောက်ကျားကို ဖူးဖူးမှုတ်ထားသော မိန်းမများရှိဟန်မတူ။ ဥပမာ - ကိုပေါ၊ တီဇက်အေ၊ ကိုဒီဘီ၊ ဂျူလိုင်အိမ်မက်
ထိုသူများ၏ ပို့စများကို ဖတ်သောအခါ ရသစုံ ခံစားရသည်။ (ရယ်စရာ စိတ်ညစ်စရာ ပျော်စရာ စသည်ဖြင့်)
ဒီအထဲတွင် မမကွန် တယောက်သာ ယောက်ကျားမကျ မိန်းမ မက (ဘလောက်ဂါ သီအိုရီ အရ)ဖြစ်နေ၏။ တခါတလေ ကိုမဆလာ ၏ ချစ်ကြောင်းများဖတ်ရ၍ တခါတလေ ကိုမဆလာ ဂရုမစိုက်ကြောင်းများဖတ်ရသည်။
ဘလောက်ဂါ မူနှင့် မကိုက်ညီ၍ မမကွန်အား ဘလောက်ဂါမမ မှ ဘလောက်ဂါအန်တီအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးလိုက်သည်။ ဒန် တန်တန်
- စင်စင်ဖို့ ဝက်အားတိုးဆေးလေးပါ မှာပေးပါ မသက်ဝေ အဟိ
ဟိုက် တီဇက်အေ ဘလောက်နဲ့ မှားပြီ: အများကြီးမန့်မိသွားတယ် ဘွာတေး
သက်ဝေ November 1, 2010 at 1:27 PM
စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ... တီဇက်အေ ဘလော့ဂ်မဟုတ်ပေမယ့်လဲ ကြိုက်သလောက် မန့်လို့ရပါတယ်... ဒီအိမ်ရှင်က တီဇက်အေထက် သဘောကောင်းပါတယ်လေ... (တိန်)
ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ညီမရဲ့...
သူ့အကြောင်းတွေ စာထဲထည့်ရေးတယ် ဆိုတာ ကောင်းတာလေးတွေပဲ ရွေးပြီးရေးရတာပေါ့လေ... မကောင်းတာတွေ ထည့်ရေးလိုက်မိရင်
"တော် တန် တိတ်... ဒီ ဘလော့ဂ် ပိတ်..." ဆို ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုံး...း))
မိုးငွေ့...... November 1, 2010 at 1:43 PM
မမသက်ဝေ ချစ်ချစ်ကိုလွမ်းတဲ့ပို့စ်လေးက ချစ်စရာလေး..မနက်မိုးလင်းရင် ကော်ဖီနံ့မွှေးမွှေးလေးကို သတိရတယ်တဲ့...ကော်ဖီကို ချစ်ချစ်က ကိုယ်တိုင်ဖျော်ပေးသတဲ့လား...
har har..... :))
ama..mie mie le lwan thwar tae.
Missing someone. (don't ask who)
rose of sharon November 1, 2010 at 3:02 PM
ချစ်စရာ ဇနီးအလိမ္မာလေးပေါ့.... လွမ်းရတဲ့နေ့တွေ အမြန်ကုန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်...
မောင်မျိုး November 1, 2010 at 4:42 PM
အစ်ကိုကြီး ပြန်လာရင် ဒီပို့စ်ဖတ်မိလည်း ပြုံးစိစိဖြစ်နေမှာပဲး)
ညီမလေး November 1, 2010 at 8:59 PM
အလို...ဒါက မမသက်ဝေရဲ့ လွမ်းခြင်း အနူပညာဆိုပါတော့ .. အလွမ်းရက်တွေ မြန်မြန်ကုန်ပါစေ မမရေး)
မမသက်ဝေပြောသလိုပဲ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးတွေ လွယ်ကူအဆင်ပြေလာပေမယ့် အေးစက်စက်ကြီးမို့ ညီမလေးကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေနားကို ခုထိ စာလေးတွေ မှန်မှန်ရေးနေတယ် ...ရူးတယ်ပဲဆိုဆို စာတိုက်ပုံးလေးထဲက စာကိုမျှော်ရတဲ့ ခံစားချက် ၊ ရေးလာပေးတဲ့ စာကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ ဖောက်ဖတ်ရတဲ့ ခံစားချက် .. အဲ့ဒါကို အင်တာနက်ကြီးကကျ မပေးစွမ်းနိူင်ဘူးလေ .. နော့း)
ဖြူ November 1, 2010 at 9:02 PM
စာလေးက ဖတ်ရတာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ
ဒါနဲ့ နေပါအုံး... သူ့ဆီက ဖုန်းတွေ ဘယ်နှစ်ခါ လာပြီးပြီလဲ မှန်မှန်ပြောနော်... ပြီးတော့ ကော်မန့်တွေကလဲ ရေးထားလိုက်ကြတာ အများကြီးပဲ ကော်မန့်တွေဖတ်ရတာလဲ တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတယ်...
mae November 2, 2010 at 12:27 AM
ရယ်လိုက်ရတာ မမသက်ဝေ.. တရစပ် မတင်ပဲ အရှည်ကြီးတင်လိုက်တယ်ပေါ့.. ဟတ်ဟတ်
မေမေလဲ ဖေဖေဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီမှ သောက်တာ.. ပီးတော့ မနက်တခါ ညတခါ ဖုန်းပြောကြသေးတယ်.. ဒါတင်မက အနော် online တက်ရင် နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ တိုးသေးတာ.. အဟိ
မမသက်ဝေတို့လဲ ဒီထက်မက ချစ်နိုင်ကြပါစေ.. :D
Moe Cho Thinn November 2, 2010 at 2:52 AM
ညီမ ခရေဖြူ ကို မမလဲ ရှင်းပါရစေကွယ်.. :)
တို့ ဘလော့ဂါ မမများဟာ အကောင်း ကြံဖန် မြင်တတ်သူများလို့ ယူဆရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းလေးတွေ ရှာကြံ ရွေးထုတ် ကြည်နူးတတ်သူများပါလေ.. (ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ အဆိုးတွေလဲ အများကြီး ရေးဖူးပါတယ်နော်)
မကောင်းတာများ သိချင်သလားးး ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား၊ ဖုန်း...ဆက်လိုက်ရမလားးး
(သူ မတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမို့ အသံကျယ်ကျယ် ပြောသွားသည်)
Hmoo November 2, 2010 at 3:59 AM
ဖုန်းဆက်လိုက် အမ၊ အသံဖမ်းပြီ: အကိုကြီးကိုပြန်ဖွင့်ပြမလို့ ဟီဟိ
အမချစ်ကြည်နဲ့ အမစုတို့ကို ဘာပြောကြမလဲ စောင့်လိုက်အုန်းမှ
လသာည November 2, 2010 at 8:48 PM
“သိစေချင်ပါသည်” .. အခုလောက်ဆို သိနေလောက်ပါပြီ မမဖို့ လက်ဆောင်များများ ၀ယ်နေရောပေါ့နော်..။ ပါလာရင် ပြောပြပါဦး:))
ဆူးသစ် November 2, 2010 at 11:52 PM
လွမ်းနေတာလား။ စာတွေတော့ အများကြီးပဲနော်...စာထဲကလူ အမြန်ပြန်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်.....
T T Sweet November 3, 2010 at 7:16 AM
သိစေချင်ပါသည် ဆိုတော့ သများတို့ကို ပြောတယ်မှတ်လို့ လာဖတ်တာ ကိုကြီးသိစေချင်တာကိုး ... အဟင့် ခြေထောက်ပေါက် စိတ်ကောက်ပြီး ပြန်သွားပါပြီ...
း))း))း))
Moe Cho Thinn November 3, 2010 at 9:15 AM
မင်းလေးဟာ ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သားပါလားကွဲ့..
ချစ်ကြည်အေး November 3, 2010 at 8:47 PM
အဲဒီ ခွေဖြူနဲ့ မွှေဖြူ အဲလေ...စင်စင်ဟာလေ... အိမ်တိုင်ရာရောက် တံခါးလာ ခေါက်တော့တာ၊ ဒီက အကြောင်းသိတွေမို့ မပြောချင်လို့ မရဘူး။ ကိုကြီး လေယာဉ်ပေါ် ခြေတဖက် လှမ်းရုံ ရှိသေး သက်ဝေက "လွတ်လပ်ပြီ လွတ်လပ်ပြီ တို့တွေ လွတ်လပ်ပြီ" အဲသလို သီချင်း အော်ဆိုတော့တာ၊ နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်ကြီး တယောက်တည်း အိပ်ရပဟ ဆိုပြီး ပျော်နေတာ....။ ဒါ ဖျစ်ညှစ်ပြီး လွမ်းပြနေတာ၊ သက်ဝေလေးရေ အိတ်တွေ ဝယ်လာမှာပါကွယ်...ငှဲ ငှဲ....ဒါဂလောက်လည်း လွမ်းမနေပါနဲ့။
ဒီတခါ သက်ဝေအိမ်သွားလို့ ငါးကြော်နှပ် ကျွေးရင် သတိထားမှပါလေ....:D
ခွေဖြူနဲ့ စင်စင် ဒါက ဒီလို ရှိတယ်လေ။ မိန်းမဆိုတာ ရုပ်လှတာ၊ ပညာတတ်တာ ဘာညာနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ယောင်္ကျား ချစ်အောင် နေတတ်ရတယ်ကွဲ့...ရက်တို သင်တန်း ဖွင့်မယ်လေ....လာတက်ကြ၊ ပြောပြမယ်
မမကွန်ကို သင်တန်းခ ဖရီးနော် ဟိဟိ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 3, 2010 at 10:50 PM
မချစ်တို့ မသက်ဝေတို့ဆီ သင်တန်းတက်ချင်လိုက်တာ
အဲလိုစာလေးတွေဖတ်ပြီး လူက ပြုံးနေမိတယ်
ချွဲတဲ့ ပိုစ့်လို့လည်း ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်နော်
sonata-cantata November 4, 2010 at 11:32 AM
♫ ဘယ်လိုများ သူလေသိ...♪♪♪ အဟိ
အမချစ်ကြည် - စင်စင်က သင်တန်းတက်စရာမလိုတော့ပါ။ ဆာမဂျီးဖြစ်နေပြီ။ မျိုးနဲ့ရီတာကိုခေါ်လာမယ်နော် ဟိ
မမကွန်က ဒါတွေနာက ဖြစ်လာတာပါကွာ အဟင်းဟင်း လို့တောင် ရယ်နေလိုက်အုန်းမယ်။ ကြုံလို့ပြောရရင် အမမိုးချိုသင်း ဘလောက်ကို အမြဲဖတ်တယ်။ ဘဝမာ အေးချမ်းတယ်လို့ထင်လို့။ ကိုယ်ကသာ ပူစပ်ပူလောင် အဲလို အေး၂
ချမ်းနေတဲ့လူတွေတွေ့ရင် အားကျတယ် နာလဲအသက်ကြီးလာရင် အဲလိုနေရမယ် (အိမ်း ခုတော့ငယ်သေးသကိုး ဟီး)လို့ အမြဲတွေးမိတယ်
(ယောက်ကျားချစ်အောင် ပြေးစက်ပေါ်တွင် နေ့တိုင်းအပြေးကျင့်နေသော အမချစ်သို့ - အဟိ)
ရေ မြေ ခြား သွား ရ တော့ ( သက် ဝေ ) အ သဲ လေး ကို ထား ခဲ့ ရ ပြီ ပေါ့ မျက် ကွယ် ရာ စ လုံး မှာ .....
အင်ကြင်းသန့် November 7, 2010 at 6:10 PM
ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ရတာလည်း ကြည်နူးစရာကောင်းသလို ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်မမ....း))